Nin loo heeysto hanjabaado uu Twitter-ka u marsiiyey wasiirka difaaca Iswiidhan | Somaliska
Nin lugu sheegay in da’duusu tahay soddon jir ayaa dacwad loogu soo oogay hanjabaad uu barta ku xirriirto ee Twitter-ka u marsiiyey wasiirka gaashaandhigga Iswiidhan ee Peter Hultqvist.
Ninkan ayaa bishii meey ee sanadkan wuxuu qoraal uu soo dhigay bartaasi Twitter-ka oo ku qorneyd afka ingiriisiga ku sheegay ” dil ama nolol, cashirna u kuwa qaa’imiint ah” Ninkan ayaa sidoo kale qoraalkaasi waxaa uu soo raaciyey sawir qolfoof madax ah ay xabadi dhex jibaaxeeyso.
Agnetha Hilding Qvarnström oo ah dacwad oogaha qaranka ayaa iyadoo u warameeysa wakaaladda wararka Siren ay sheegtay in waaxdda gaashaandhiga ay fiiro u yeelatay qoraalkaasi una gudbisay booliska qaranka ee ammaanka qaabilsan. Waxeey sidoo kale sheegtay in hanjabaadan tahay mid waadix ah oo ku jiheeysneyd wasiirka islamarkaasina aan wanagasaneyn.
“Tani waa mid cad in isagu ka dambeeyo, waxaana eegeeyna markaasi inaan isku aragti nahay maxkamadda” ayey tiri Agnetha. Ugu dambeeyntiina wasiirka ayaa ku howlan siddii ninkaasi u bixin lahaa xaal marin gaareeysa 15.000 (Shan iyo tobban kun) oo karoonka iswiidhish-ah, sababo la xirriira falkaasi hanjabaada ah ee u geeystay.
Amir Adan oo markale isku sharaxay Baarlamaanka Sweden